António Guterres oo markii ugu horeysay ka hadlay Khilaafka dowladda iyo Maamul Goboleedyada | Entertainment and News Site
Home » News » António Guterres oo markii ugu horeysay ka hadlay Khilaafka dowladda iyo Maamul Goboleedyada
António Guterres oo markii ugu horeysay ka hadlay Khilaafka dowladda iyo Maamul Goboleedyada
daajis.com:-Xogheyaha guud ee qaramada midoobey António Guterres ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka ka dhex jiro dowladda Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada isagoo baaq u diray dowladda iyo Maamul Goboleedyada Soomaaliya.
Xoghayaha ayaa dowladda Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ugu baaqay in ay ka wada hadlaan qeybsiga awoodaha, dakhliga iyo kheyraadka, sidaasi waxaa uu ka sheegay shir golaha ammaanka uu ka yeeshay dalalka ay abaaraha ku dhufteen oo Soomaaliya ay ku jirto.
“Golaha ammaanka waxaa uu soo jeedinayaa in Soomaaliya laga taageero dhanka siyaasadda, in xukuumadda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada jira ay wada shaqeyn fiican yeeshaan, iyada oo aan horumar siyaasadeed la gaarin, waa adag tahay in wax laga qabno Banii’aadnimada” ayuu yiri António Guterres .
“Waxaa kale oo muhiim ah in laga wada hadlo arrimaha federaalka ah sida awood-qeybsiga, heshiisyada la xiriira dakhliga gudaha iyo sida loo qeybsanayo Kheyraadka” ayuu sii raaciyey.
“Soomaaliya, in ka badan 6 Milyan ayaa si toos ah ugu tiirsan kaalmada Banii’aadnimo si ay nolol u helaan halka hey’adaha gar-gaarka ay ka cabanayaan loolanka, amni darrida, waddooyinka xiran iyo iska daba-wareegga xafiisyada” hadalkaan ayaa sheegay xilli uu la hadlayey golaha ammaanka